Global Voices teny Malagasy » Zeorzia: Ny Fahamaroam-Piterahana Masina! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Mey 2017 19:07 GMT 1	 · Mpanoratra Simon Maghakyan Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Zeorzia, Fampandrosoana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
(Marihina fa tamin'ny 30 Martsa 2009 no nivoaka voalohany ny lahatsoratra teny anglisy)
Nitombo 20 isanjato ny taham-piterahana ao Zeorzia Firaisana Sovietika teo aloha ary nahazo tombontsoa tamin'izany ny Eglizy Ortodoksa ao amin'ny firenena. Ny fampanantenana izay nataon'ny mpitarika ny fiangonana Zeorziana amin'ny fanaovana batisa ireo zaza vao teraka no tompon'andraikitry ny fahagagana tamin'ity fahamaroam-piterahan-jaza nilaina fatratra tao amin'ity firenena Kristianina iray ity. Toa nahagaga ireo bilaogera izany .
Nanao fanehoan-kevitra momba ny vaovao  ny My Blogian .
Tsy mila virijiny hanaovana fananahana masina i Zeorzia, Firaisana Sovietika teo aloha . Fa mba hampitomboana ny isan'ny mponina kosa dia nampanantena ny hanao batisa manokana ireo zaza rehetra teraka ho an'ny fianakaviana izay efa manan-janaka roa ny ray masin'i Zeorzia .
Nanampy ny heviny  i Wu Wei .
Seriny tamin'ny fampitomboan'ny Patriarika ny taham-piterahana noho ny ezaka nataony manokana ao Zeorzia ny BBC. Tsy tamin'ny fomba mahazatra (tsy misy zana-drahalahy na fanaovana kiantranoantrano) fa tamin'ny fanoloran-tena ho mpiantoka ny zaza teraka rehetra tamin'ity taona ity. Nandray izany ho zava-dehibe ny Zeorziana amin'ny maha mpino azy ireo ka nampitombo ny taham-piterahana tamin'ity taona ity.
Feno faharisihana kokoa  ny American Papist .
Tiako faranana amin-kafaliana ny vaovaon'ny herinandro. Tsy tsara kokoa noho izao manaraka izao izany:
Eritrereto raha manao izany fampanantenana izany ho an'ny fianakaviana ao amin'ny dioseziny ny Eveka Amerikana?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/26/100801/
 fanehoan-kevitra momba ny vaovao: http://blogian.hayastan.com/2009/03/29/georgia-holy-conception/
 Nanampy ny heviny: http://kosmyryk.typepad.com/wu_wei/2009/03/fiddling-while-rome-burns.html
 Feno faharisihana kokoa: http://www.americanpapist.com/2009/03/baby-boom-with-patriarch-promise-to.html